Matambo matsva anosvika eApple Watch kubva kuTOMS | Ndinobva mac
Matambo matsva eApple Watch anosvika kubva paruoko rweTOMS
Zviripachena kuti nekusimbirira kwaApple kuti Apple Watch ive yakajairwa yemadhora kutenderera pasirese, mazhinji uye akawanda mabhenji ari kujowina fashoni yekugadzira zvishongedzo zvacho. Yekupedzisira isu tine humbowo Izvo zvinobva kune yakakurumbira shangu uye chipfeko brand TOMS.
Yakagadzira mutsara mutsva wemabhandi eApple Watch iyo inovimbisa kufadza avo vanosarudza kuitenga uye ndeyekuti ivo vanoita kuti Apple Watch itore danho rakasiyana neizvo zvatinoziva kare netambo dzepamutemo kana kubva kune vamwe vagadziri.
Iyo shangu brand TOMS yakaburitsa pane yako webhusaiti tambo nyowani yemabhande akagadzirwa nemucheka wenylon ane dehwe chairo kumashure pa buckle kana muviri wese uye nemavara akasiyana siyana. Tambo dzakagadzirirwa zvese zviri 38mm uye 42mm kesi kuitira kuti vese varidzi ve Apple Watch, Chero ipi iri vhezheni yacho, iwe unozogona kunakirwa nerudzi urwu rutsva rwetambo.
Sekuona kwedu pawebhusaiti yavo, vakagadzirira gumi akasiyana dhizaini uye mune yega yega yavo tinogona kusarudza matanho maviri ayo Iwo akatengwa pamadhora makumi mana nemaviri kune avo vane dehwe chete pabhuruki uye madhora makumi manomwe nemashanu kune avo vane dehwe pese pese mutumbi wetambo. Zviri pachena kuti mutengo hausi wepasi pasi watakaona, asi kune yeTOMS brand chishongedzo, mitengo yatakaratidza ndeyechokwadi.
Uyewo, pano hakusi kuiswa kweTOMS munyika yetambo dzeApple Watch uye zvakare inozivisa kuti patambo yega yega inotengwa, mari ichagoverwa kuitira kuti munhu wese anochida agone kunakirwa negore remagetsi ezuva, kuitira kuti vazhinji vave vanhu vanozowana zviwanikwa yechiedza chakachengeteka uye chakavimbika chinogona kugadzirisa mashandiro evanhu ava kana mamiriro ekudzidza nevana vanochida.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » Apple zvigadzirwa » Apple Watch » Matambo matsva eApple Watch anosvika kubva paruoko rweTOMS
Apple inoisa mukutengesa bhuku rakanzi "Yakagadzirwa naApple muCalifornia"
Zuva iri ndere nezve zviziviso kuApple. Iye zvino yave nguva yeBeats Solo3 Wireless #GotNoStrings